ရောဂါဗေဒငြူစူသောစိတ် - ဖို့အမှန်တကယ်သို့မဟုတ်အလားအလာမိတ်ဖက်ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာခံယူချက်တစ်ပြည်နယ် ကိုပြောင်း ။
ဤရောဂါ၏လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေများသောအားဖြင့်ငြူစူသောစိတ် (သို့မဟုတ် revnivitsa) အဆက်မပြတ်ဖောက်ပြန်၏သက်သေအထောက်အထားများက၎င်း၏ဒုတိယထက်ဝက်အဘို့အရှာနေနှင့်အဆုံးစွန်သောရန်ဆည်းကပ်၏ဟောပြောသောတောင်မှအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချအငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ခုတည်းအောက်တွင်ရှိကြောင်းလည်းစီစဉ်ထား "ဖုံးကွယ်ထားကြောင်းမူဝါဒအ" အဖြစ်ရှုမြင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် တစ်ခုတည်းရည်မှန်းချက်: သူ့ကို (သို့မဟုတ်သူမ၏) သတိဝီရိယနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရန်။ (ဥပမာ, သူလုပ်ရပ်အတွက် cheaters ဖမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အမှု၌, တစ်ဦးသေနတ်သယ်ဆောင်) ထို့ပွငျရောဂါဗေဒမနာလိုဆင်းရဲဒုက္ခ, တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာနှင့်နှုးကတိုးပြီးကြီးထွားနိုင်သည့်လက္ခဏာတွေ, များသောအားဖြင့်အသေးစိတ်အတွက်လက်တုံ့ပြန်များအတွက်အမျိုးမျိုးသော options များထင်နှင့်ဂရုတစိုက်ထိုသို့ပြင်ဆင်နေ။
လူတို့တွင်စိုးငြူစူသောစိတ်က ပို. ဘုံအမျိုးသမီးတွေထက်ဖြစ်ပြီး, က psyche အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်လည်းပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်ထင်ရှားတဲ့အကြောက်လွန်ရောဂါအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူ schizophrenia ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ပါသည်။ မနာလိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူမ၏အိပ်ခန်းထဲမှာ "bug တွေ", လုံခြုံရေးကင်မရာများ, ဒါမှမဟုတ်ဒါခေါ်မမှန်သောမှန်နားထောင်ခြင်းအပါအဝင်ယင်း၏နည်းစနစ်၏အများဆုံးခေတ်သစ်သုံးပြီးသူ့ဇနီး၏စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်စည်းရုံး။ "Demon" သူမခင်ပွန်း၏ရောဂါဗေဒငြူစူသောစိတ်အဆက်မပြတ် missus အိပ်ပျော်ကြောင်းနှင့်သူပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပုံကိုမြင်သောသူသည်အထံတော်သို့တီးတိုး, သူ့ဦးခေါင်း၌ထိုင်လျက်, ကမည်သူမဆိုမှအရေးမပါဘူး: ကပီဇာကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ဖြတ်သန်းကားတစ်စီး၏ယာဉ်မောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ဆိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အတိုင်ပင်ခံ။ ဆင်ခြေမပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်မဲ့: အားလုံးယုံကြည်ချက်သူတို့၌ပြုတော်မူအပြစ်မရှိကြောင်းတစ်ဦးထက်ပိုသောအထောက်အထားစဉ်းစား, ဤအကြံပြုချက်များ၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့လှသောအတွက်အလွန်မှထုတ်ပြန်သောရိပ် မိ. ။
အမျိုးသမီးရောဂါဗေဒမနာလိုအကြောင်းတရားများ, မူအရ, ယောက်ျားအတွက်တူညီသောရောဂါ၏အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ပေမယ့်အဆုံးစွန်သောမတူဘဲထိုကဲ့သို့သောဘေးများအတွက်မျှတတဲ့လိင်ဓာတ်ကူပစ္စည်းမှာ ပို. ပို. ပြုမူ စိတ်ကျရောဂါ တစ်ခုညံ့လို့ရှုပ်ထွေးအပေါ်အခြေခံပြီးသော, ပြန်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့် hypertrophied ကိုနောက်ကောက်ယုံကြည်မှုများမိတ်ဖက်အတွက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး revnivitsey နှင့်အတူဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းငရဲသို့လှည့်ကို၎င်း, အကောင်းဆုံးအမှု၌အငြင်းပွားဖွယ်နှုတ်ဆက်စကားအဆုံးသတ်ထားသည်။ မှာအဆိုးဆုံးသောကြောင့်ထိုသို့သောအမျိုးသမီးအဖြစ်ပင်အသေခံဖယ်ထုတ်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, သစ္စာမဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးအစွန်းရောက်လုပ်ရပ်များနိုင်စွမ်းကြီးနှင့်လက်စားချေ၏ခေတ်မီနည်းလမ်းတွေတိုးမြှင့်။
ဆေးကုသမှုလိုအပ်မယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပါသည် - လူတယောက်သည်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ရောဂါဗေဒငြူစူသောစိတ်: ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆိုးမှရှောင်ရှားရန်, သင်တဦးတည်းတကယ်တော့နားလည်ရပေမည်။ တစ်ဦးတည်းကဒီဘေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အားလုံးကြိုးစားမှုများသောအားဖြင့်ပျက်ကွက်အတွက်အဆုံးသတ်နှင့်ငြူစူသောစိတ်မဆိုသံသယသညျ့ပုံကြီးချဲ့အသိဟာအရည်အချင်းပြည့်အကူအညီတောင်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
စိတ်ပညာရှင် - ယောက်ျားနှင့်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ
ငြူစူသောစိတ် - ကောင်းမကောင်းပါသလဲ
သင်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြဘူး - ခစျြ?
စိတ်ပညာရှင် - ရှင်သန်ဖို့ဘယ်လိုကောင်လေး, ပစ်
တစ်ဦး purebred ကလေးရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်အကြံဉာဏ်ကို - တစ်ကွောငျကလေးရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Paparazzi Charlize Theron မှသေးငယ်တဲ့သမီးဓါတ်ပုံ
Bormental - နေ့စဉ်နေ့တိုင်းများအတွက်အစားအစာမီနူး
ဒယ်အိုးထဲမှာကြက်သား Tabaka - စာရွက်
တစ်ဦး Lucid အိပ်မက်ဖုန်းခေါ်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပျားလပို့ကို - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
အသက်အရွယ်အဘို့အ Size ကိုဇယားသားသမီးရဲ့အဝတ်အစား